Sdàna: Ny Hatsaràn’i Darfour, Fikatsahana Fandriampahalemana, Ary ny Fifampidimpidiran’ny Fifanomezana Fotoanan’ireo Mpifankatia · Global Voices teny Malagasy
Sdàna: Ny Hatsaràn'i Darfour, Fikatsahana Fandriampahalemana, Ary ny Fifampidimpidiran'ny Fifanomezana Fotoanan'ireo Mpifankatia
Voadika ny 09 Oktobra 2017 6:25 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny May 2007)
Ho an'ny maro, ny teny hoe Darfour dia midika horohoro, fahafatesana ary hadisoam-panantenana, Saingy ny Darfour, izay ho aseho antsika, dia firenena iray tsara tarehy, na eo aza ny fisian'ny hirifiry nanjo ireo olombelona tao.
Ho atombontsika amin'ity fitetezana bilaogy ity, miaraka amin'ireo sary mahafinaritra avy any Darfour, napetrak'i Precious [An] ety anaty serasera, ankizivavy sodaney iray eo amin'ny roapolo taona eo, miasa aminà ONG iray ao Sodàna.
Tamin'ny herinandro lasa, tao anatin'ilay ONG iasàko, nila olona ry zareo mba handeha any amin'ny biraonay any Darfour, hiandraikitra asa informatika : tsy ao anatin'ny departemantan'ny informatika aho saingy nanolo-tena ny ho any. Tiako hatrizay ny hijery ireo faritra hafa ao Sodàna, isan'ireny i Darfour, Juba, Kassala, ary Kadugly.
Indrisy anefa, tsy nankasitrahan'ny reniko izany. Nitalaho taminy aho nandritry ny ora maro, fa tsy nisy vokany. Kivy tanteraka aho.
Ny ampitson'iny, rehefa noresahako tamin'ireo mpiara-miasa tamiko ny hadisoam-panantenako, nasehon'ny iray tamin'izy ireo tamiko ireto sary nopihany ireto, nandritra ny fitsidihana farany nataony tao Kadugly ao Abu Jebaiha.
Daana Lost in Translation [Arabe] mandefa ihany koa saripika iray mahafinaritra ahitàna an'i Darfour.
Manoratra bilaogy momba ny sarimihetsika ao Afrika izy ary maneho hevitra manokana momba ilay fehezantenin'ilay mpilalao sarimihetsika, Leonardo Di caprio, “Ity tanibe adinon'Andriamanitra ity”, ao anatin'ilay sarimihetsika Blood diamonds.
Mandritra ilay sarimihetsika manontolo, tsy mitsahatra izy ny manondro an'i Afrika ho toy ny « tanibe adinon'Andriamanitra », fa izaho kosa miantso azy ho ilay tanibe adinon'ny olona. Tsy nanadino an'i Afrika Andriamanitra. Ny mifanohitra amin'izany aza, mamihina an'i Afrika Andriamanitra ary namatsy azy taminà fanomezana maro isankarazany, saingy ny Olona no namadika io tany io noho ny fitiavantena sy ny hadalàny.
Nomadic Thoughts [An], bilaogin'ny vehivavy Sodaney iray monina any Tanzania, dia nisafidy ny hamoaka lahatsoratra iray lafatra sy mahaliana momba ny ‘tontolo mifampidimpiditra sy saro-bahàna amin'ireo fifanomezana fotoanan'ny mpifankatia ao Sodàna:
Lasa sarobahàna mihoatra lavitra noho ny tontolo politika ny tontolon'ny fiarahan'olon-droa ao Sodàna. Vao indray mandeha monja nisy nahita anao niaraka tamin'olona iray (tsy mitovy fananahana aminao), mandritra ilay antsoina hoe « fifanomezana fotoana », dia fantaro fa amin'izay fotoana izay indrindra, efa voasoratrao ny tantaranao… Toa efa tsinjoko ilay izaho lasa ranenibe, ary ireo olona mbola ho afaka foana hitanisa ny anaran'ireo efa nisary zoro tamiko fahiny. Tsy maintsy raisina anaty kajikajy ny isan'ireo fotoana izay tsy maintsy nanafoananao fifanomezana fotoana mba tsy hiheverana anao ho diso malalaka be / mora alaina. Avy eo, mandritra ny fifanomezana fotoana, ireo “atao/tsy atao” rehetra izay noterren'ny namanao mba hotadidiana satria ao amin'ny firenenay, tsy azo atao kinangananga ny fitsipi-pitondrantena anaty fiarahamonina.
Ny bilaogy Black Kush [An] no ahafahantsika mifankahafantatra amin'i Luol Deng, Dinka iray avy ao Sodàna Atsimo, milalao ao anatin'ny ekipa matianina basikety Chicago Bulls:
Manana isa 26 i Luol Deng, “rebonds” 5, tohana enina, tsingoka roa ary block iray tamin'ilay lalao 107-89 nataon'ny Bulls, fandresena roa nanoloana ny Heat tamin'ny Talata 24 avril.
Aperadosini [An] mandefa lahatsoratra iray mahaliana momba ny fandinihany ny fotokevitra safidy malalaka, mifanohitra amin'ny hoe ‘efa vosoritra mialoha’ .
…Lasa toa tsy mampisy lanjany ny fiainana ny finoana ny lahatra, raha toa ny làlam-piainanao efa voasoritra mialoha, ary rehefa atambatra mety hidika hoe tsy manana safidy malàlaka isika satria misy fahefàna iray faratampony sy mahery mifehy an'io safidy io. Olana iray ho ahy momba ny fiomba fijery an'Andriamanitra io tany aloha, ny fahafantarana mialoha hoe isika dia nalahatra handeha ho any am-paradisa na ho any amin'ny helo. Raha efa fantany mialoha izany, nahoana no mbola noforoniny isika?
Farany, Drima, The Sudanese Thinker [An] maneho hevitra amin'ireo fifampiraharahàna vao haingana natao tao Libia momba an'i Darfour.
Miakatra ny tsindry ary inoako fa misy ahiahy tsy manam-paharoa ao. Iray amin'ireo zavatra tena mety hampanano-sarotra tokoa ny asa ny hoe nandritra iny taona lasa iny, notohizan'ireo andiany mpihoko ny fizarazaràny ho andiany kely marobe isankarazany, samy manana ny tanjony manokana ary mifanohitra. Mila manoritra tanjona iraisana ireo mpihoko. Mivavaka ho amin'izany aho
Tantaran'ny Sodàna farany
20 Febroary 2021Afrika Mainty
Roa taona ny revolisionan'i Sodàna, mitaky fiovana ny diaben'ny mpanao fihetsiketsehana
27 Septambra 2020Afrika Mainty